ESI LELEE ANYA HOCKEY ONLINE RUSSIA SLOVAKIA NA IHE OMUME NDỊ ỌZỌ NKE 2014 OLYMPIC NA SOCHI - NETWORK NA INTANETI - 2019
Esi lelee anya hockey online Russia Slovakia na ihe omume ndị ọzọ nke 2014 Olympic na Sochi
Ihe omume nke ụbọchị ndị a niile bụ 2014 Olympic na Sochi, otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-agba anyị bụ hockey, karịsịa mgbe ụmụ nwoke na-egwuri egwu. Ụnyaahụ - a egwuregwu na United States, na taa, February 16, 2014 na 16:30 - Russia na Slovakia egwu (nke anyị, n'ụzọ, meriri na njedebe ụwa Cup afọ abụọ gara aga).
Adịghị m ewe iwe ọkụ, ana m emeso egwuregwu Olympic ahụ dị ka ihe omume dị ịrịba ama (m ga-achọ ịhụ otú e si hazie ihe niile na Sochi na ndị mmadụ, ọ bụghị maka egwuregwu n'onwe ha), mana m nwere ike ịgwa gị ebe na otu esi ele ndị Russia anya na ya. -Slovakia na ihe ndị ọzọ dị ịrịba ama nke Olympiad.
Ndị ọrụ gọọmenti na-ahụ maka mgbasa ozi nke Olympic 2014
A na-ekiri mgbasa ozi n'ịntanetị nke asọmpi Olympic na saịtị ndị ọrụ gọọmentị gọọmenti etiti, a machibidoro ọtụtụ ebe ndị ọzọ na agbasa ozi n'ikuku n'ihi nchụpụ nke ihe onwunwe, nwebisiinka na maka ihe ndị ọzọ.
Nanị ihe ị ga-atụle bụ usoro telivishọn dị iche iche nke ọwa ndị a. Dị ka ihe atụ, a ga-egosi ndị hockey (ndị ikom, Russia-Slovakia) na Russia 1 (mgbasa ozi ga-amalite n'oge elekere 16:00), ma ọ gaghị adị na ORT. Nke ahụ bụ, M na-atụ aro ka ị mata ihe omume TV ahụ tupu oge eruo ka ị ghara ịghara ịlụ ọgụ dị mkpa maka gị.
A na - ele anya na egwu ndị isi asọmpi kachasị na Olympiad na saịtị ndị na - esonụ:
Nke mbụ ọwa //stream.1tv.ru/live
Russia 1 na Russia 2 //live.russia.tv/
I nwekwara ike inweta ihe niile si na Olympiad, ule nyocha na ozi ndị ọzọ na saịtị ndị a, ma ọ bụrụ na ị nwere ekwentị gam akporo, ana m akwado ibudata ngwa n'efu. Sochi 2014 Results - Nchịkọta ndị isi nke kọmitii na-ahazi nke Olympiad. Ngwa dị maka nbudata na Google Play ụlọ ahịa //play.google.com/store/apps/details?id=com.sochi2014.results
Isi ndụ na agbasa ozi n'ikuku na 02/16/2014 na 02/17/2014
Channel One - 2:00 pm - Eme ski, Men, Relay
Russia 1 - 16:00 - Hockey Men, Russia-Slovakia
Russia 2 - 17:55 - Skeleton, ụmụ nwoke
Channel One - 6:00 pm - Biathlon, ụmụ nwoke, mmalite mmalite
Russia 1 - 18:50 - Egwu ọgụgụ isi, usoro mkpirikpi
Russia 2 - 23:00 - hockey (Russia-Slovakia), kwughachi
Channel One - 18:25 - Bobsled, ụmụ nwoke, igwe ihe osise, skate free
Russia 1 - 18:30 - Biathlon, ndị inyom, mmalite mmalite
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na i nweghị oge iji lee asọmpi ahụ ị nwere mmasị n'ịdị ndụ, ị nwere ike ịhụ ha mgbe niile na ndekọ na saịtị nke telivishọn telivishọn.